Cabangisisa futhi uzihlole ngaphambi kokuqala ibhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ziningi izizathu ezenza abanye abantu bafune ukusula emsebenzini baziqalele okungokwabo. Isikhathi esiningi kuba yingenxa yengcindezi umuntu ayithola ekhaya noma empilweni. Noma kube nje ufuqufuqu nothando umuntu analo lokuyoqala into yakhe azimele gelekeqe. Akulula-ke ukuyeka emsebenzini akunandaba ukuthi uyeka ngasiphi isizathu. Inkinga wuvalo.
Ngisho ngabe umuntu usebale waqeda ukuthi uma ephuma emsebenzini naku azokwenza kodwa uvalo luyohlale lumi ngenhla. Le nto ifana ncamashi nomuntu obesejwayele ukubhukuda esizibeni esincane abesesijwayele bese ezithola esengena phakathi nolwandle kufanele abhukude khona. Loko kushayisa ngovalo ngoba manje lapho esebhukuda khona sekukhona noshaka, into ebingekho esizibeni akade ebhukuda kusona.
Siyekiswa yizizathu eziningi emsebenzini esisuke sitohoza kuyona. Okunye wukuthi alusekho kwalona uthando lomsebenzi. Kokunye kube wukuthi inhlalo emsebenzini ayiseyinhle. Noma nje sekuyisikhathi sokushintsha umsebenzi uyeke ukuqashwa kodwa usebenzise ikhono lakho ukuziqalele okungokwakho. Baningi abantu abenzela izinkampani abazisebenzelayo itshe lemali. Uma bebheka bethatha behlanganisa babone ukuthi bamosha isikhathi sabo ngokuba kulezi zinkampani abakuzo bezenzela itshe lemali.
Kepha-ke ukuzimela kudinga isibindi; akulula. Akusho ukuthi uma usuphumile kuzoba lula njengoba izinto bezenzeka usengaphakathi enkampanini. Kubalula ukwenza izinto uma kukhona abantu abaningi abakusekelayo noma abasekela umsebenzi wakho. Kepha uma usuphumile sekufanele kube uwena mathupha ozibambela izinto eziningi. Abasekho abantu abakwenzela yonke into. Liyothi uma selikhula ibhizinisi bese ufaka zonke-ke lezi zinhlaka eziyinsiza ebhizinisini ukuthi lisebenze kahle, ungabe usagqilazeka.
Ngiye ngisho ukuthi isikhathi esiningi kuba nzinyana kulaba bantu abayeka umsebenzi ngenxa yengcindezi ebese beyozisebenza, labo isikhathi esiningi abakwazi ukubekezela ngoba bafuna izinto zenzeke ngokushesha ngenxa yokuthi banengcindezi abanayo okumele bayisombulule. Ngakhoke badinga imali ngokushesha.
Bese kuthi laba abangena ngentshisekelo nangothando bona bayakwazi ukubekezela ngoba inhloso yabo kusuke kuwukhwakha ibhizinisi elizohlala iminyaka lize lidlulele ezizukulwaneni ezilandelayo. Ngisho izimo zingavumi, izinto zingahambi kahle, bayakwazi ukuma baphokophele phambili. Wena-ke uyinhloboni kapende?
Naku okunye okubalulekile. Kuhle ukuthi ngaphambi kokuyeka emsebenzini uke uzihlole, uzixilonge wedwa nje ukuthi uwuhlobo luni lukapende. Ingabe uyile nhlobo yomuntu ewuthandayo umsebenzi noma uyile nhlobo eyivila okuthi uma ithola isikhathi esincane nje idoje ingawenzi umsebenzi okufanele iwenze noma ingawuqedi? Uwena ozaziyo.
Uma kuwukuthi ukhuthele, nasebhizinisini lakho uzokhuthala wenze nabakusebenzelayo bakhuthalele umsebenzi wabo.
Uma kuwukuthi wena uyinkunzimalanga yevila, nasebhizinisini lakho uzoba njalo, okubi-ke wukuthi uzothelela ngisho nezisebenzi zakho ngobuvila. Ngakho-ke uma uzimisele ngokushiya bese uyoziqalela ibhisinisi lakho kufanele ushintshe ukwenza uma ufuna ukuhamba leyo ndlela. Akekho umuntu ozokugqugquzela ukuthi ufake umfutho kuyo yonke into oyenzayo, uwena kuphela.
Yazi ukuthi ufuna ukwakha uhlobo olunjani lwebhizinisi. Zazi futhi ukuthi bungakanani ubuchule bakho, ungafuni ukuzenzela yonke into, ngisho nezinto ongenalo ulwazi olwanele lwazo. Thola abanolwazi ukuthi bakusize ukwazi ukufinyelela phambili lapho ufuna ukuya khona.
Okunye okumqoka wukuthi uma usuthathe isinqumo sokuthi uyeka umsebenzi, yenza isiqiniseko sokuthi ubuza kwabaphambili asebeke bayihamba le ndlela wena ofuna ukuyiqala. Kuyokusiza loko, ungalenzi iphutha ngoba uma ungakwenzi loko uyodonsa kanzima.